အရင့်ရောင်မှတ်တမ်း ဩဂတ်စ် ၂၀၁၃ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » အရင့်ရောင်မှတ်တမ်း ဩဂတ်စ် ၂၀၁၃
အရင့်ရောင်မှတ်တမ်း ဩဂတ်စ် ၂၀၁၃
Posted by kai on Aug 2, 2013 in Contributor, Columnist, Editor's Notes | 67 comments
ငါးကြီးဆီစားရင်.. ဆီးကျိတ်ကင်တာဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်တဲ့.. ၇ဝရာခိုင်နှုန်းတောင်…။
7/24/2013 @ 8:00AM |15,824 views
Indeed, they pointed to an increased risk of advanced prostate cancer of over 70 percent in men who had high levels of long-chain omega-3 fatty acids in their blood.
မြေပဲဆံနဲ့လုပ်ထားတဲ့မုန့်စားလိုက်တာ.. အလဂျီနဲ့ ၁၃နှစ်ကလေးသေတယ်တဲ့..။
အဲဒီဘိုမလေးက စားပြီးသိသိချင်းအံထုတ်တာမရလို့ .. အဖေဆရာဝန်ကအသက်ကယ်ဆေးထိုးတာလည်း မရတော့ပဲ ဆေးရုံပို့တာ လမ်းမှာတင်သေတာပါတဲ့..။
Girl with peanut allergy dies after eating peanut butter-laced dessert at summer camp
Natalie Giorgi, 13, was staying with her family at the campsite when she accidentally bit intoaRice Krispies treat iced with peanut butter frosting.
A family vacation tookatragic turn whenateenage girl withasevere peanut allergy died after accidentally eatingapeanut butter-laden dessert.
Thirteen-year-old Natalie Giorgi, from the Sacramento area, was staying at Camp Sacramento in El Dorado County, Calif., with family members and other campers.
Read more: http://www.nydailynews.com/life-style/health/girl-nut-allergy-dies-eating-dessert-summer-camp-article-1.1412578#ixzz2ali7DD3C
ဆေးချလို့ အချုပ်ထဲထည့်တာ.. အချုပ်မှာရဲတွေ ၄ရက်မေ့ထားမိတဲ့အတွက် ကောလိပ်ကျောင်းသားကိုနစ်နာကြေး ၄.၁သန်းဒေါ်လာ အစိုးရကလျှော်ပေးတယ်တဲ့..
theguardian.com, Wednesday 31 July 2013 03.14 EDT
Jump to comments (436)
Daniel Chong drank his own urine as he endured four days alone inapolice cell without food, water or anyone seeming to know he was there. Photograph: KC Alfred/AP
“It sounded like it was an accident –areally, really bad, horrible accident,” Chong said.
မာတင်လူသာကင်းရဲ့..I Have A Dream Speech နှစ်၅ဝပြည့်သွားပြီ..
Martin Luther King – I Have A Dream Speech – August 28, 1963 …
Jan 21, 2011 – Uploaded by sullentoys
I HaveaDream Speech Martin Luther King’s Address at March on Washington August 28, 1963. Washington …
အဲဒီ သတင်းပြောဖို့ သူကြီး ဦးသွားပြီ။
The US is commemorating the 50th anniversary of the March for Jobs and Freedom, the civil rights rally at which Martin Luther King Jr made his “I haveadream” speech
ဆက်ရရင် ဒီမှာလဲ အရင်က အသားအရောင်ကွဲ ပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ် မခန့်တာတွေ၊ ကျွန်ဈေး တွေ ရှိခဲ့ဖူးတာ ဒီနေ့ သတင်းတွေထဲ အတော်ဆွေးနွေး ကြတယ်။
ပြောရရင် လူကိုလူလို သဘောမထား ဘဲ ခွဲခြား ထားတာ တွေ ဟာ အရင်က အင်မတန်ဆိုးခဲ့ တဲ့ နိုင်ငံ တွေ မှာ သမိုင်း အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပြီ။
အဲဒီလို သမိုင်းမှာ ချန်ခဲ့နိုင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာ တွေကို ဒီနေ့မှာ ဝင့်ကြွားပြီး ပြောနေနိုင်ကြပြီ။
အဖြူ အမဲ အရောင်မခွဲ လူမျိုး ဘာသာ မခွဲ တစ်ပြေးညီ နေနိုင်တဲ့ မြေ အဖြစ် ဂုဏ်ယူပြီး နေနိုင်ကြပြီ။
ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာတော့ အခု မှ ထပြီး လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အခွဲ ကြီး ခွဲ ပြ နေတာတွေ၊ အိမ်ဖော် တွေကို ကျွန်လို ခိုင်းနေပြီး ဟန်ပန်တစ်ကြီး လုပ်နေတာတွေ ဟာ ရှက်စရာ ဖြစ်လာနေပြီ ဆိုတာ သိကြဖို့ ကောင်းတယ်။
I haveadream that my four little children will one day live inanation where they will not be judged by the color of their skin,
တကယ်တော့ လူတိုင်း လူတိုင်း မှာ ကိုယ်ချင်းစာနာ နိုင်တဲ့ စိတ်ကလေး မွေးလိုက်နိုင်ရင်ဘဲ ကမ္ဘာကြီးက အတော်လှ ပြီး အေးချမ်း သွားမှာ။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု တွေ လဲ အတော် မရှိသလောက် နဲသွားမှာ။
ဒါထက် အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း လား၊ အရင့်ရောင်မှတ်တမ်းလား။ ဒီလ ခေါင်းစဉ် မှားနေတယ်။
အောက်ကစာသားမျိုး.. ဆိုင်းဘုတ်လေးချိပ်ထားတာတွေ့ရင်.. မှတ်တမ်းတင်ပေးပါကွယ်…
ဒီ တစ်ခါ နောက်ဆုံး ပြောရဦးမယ်~~~~~
ပုဆိုးနဲ့ တိုက်ပုံ တကယ် မဝတ်ရင် ~~~~
မေမေက မကြိုက်တော့ ~~~` ကန်တော့ဆွမ်းကွယ်~~~~~~~
မြန်မာရိုးရာ က ဘာ အဝတ်အစားမျိုးတုန်းဟမ်??
KZ တော့ သတို့သားရှာမရလောက်တော့။
စကားအတင်းစပ်= မိုးZ ကလေးပျောက်နေတာကြာပေါ့။
သီချင်း လေး သတိရလို့ ညည်းမိတာပါ ကို ၂ လွှာပေါင်း တစ်ရွက်ရယ်။
လူကို ကြိုက်ရင်တော့ ဟို သီချင်းပြောင်း ဆိုမှာပေါ့၊
ဒီ တိုင်းပဲ ဆင်းလာခဲ့~~~~
မိုးဇီတို့ ဘယ်ပျောက်နေတယ် မသိ။
အိန္ဒိယ ကလာတဲ့ ဒိုတီနဲ့ စိနက လာတဲ့ ပင်နီ များဗျာ
ဝတ်စာလား မဝတ်ဘု ..
စကားမစပ် ဂျင်းပန် ကို ကုလ က ကမာ္ဘပိုင်ပစ္စည်းကြေငြာထားတာဆို..
ဟုတ်ရင် အဲ့ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်တဲ့ဆိုင်ကို လူ့အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်းနဲ့
Levi Strauss patents copper-riveted jeans — History.com This Day in …
Lead Story: Levi Strauss and Jacob Davis receive patent for blue jeans, 1873 … Davis’ riveted pants had proven popular in Reno, but he neededapatent to …